Maqaallada Micah Heath ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Micah Heath
Micah Heath waa agaasimaha cilmi baarista iyo horumarinta alaabta ee Booska macquulka ah, shirkad Inc. 500 ah oo xarunteedu tahay Oregon oo xafiisyo ku leh dalka oo dhan. Wakaaladu waxay bixisa maamulka PPC ee adeega buuxa, SEO, iyo xalalka naqshadaynta shabakada ee ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yaryar, waxaana lagu qiimeeyay meesha saddexaad ee ugu fiican ee laga shaqeeyo America by Inc. Magazine.
Shan tilaabo oo aad Maanta Qaadan karto si aad u xoojiso iibka Amazon
Isniin, February 14, 2022 Isniin, February 14, 2022 Micah Heath
Xilliyadii wax-soo-iibsiga ee dhawaa waxay ahaayeen kuwo iska caadi ah. Intii lagu jiray masiibo taariikhi ah, dukaamaystayaashii waxay ka tageen dukaanno leben-iyo-hoobiye ah oo raxan raxan u socda, iyadoo taraafikada cagta ee Jimcaha Black Friday ay hoos u dhacday in ka badan 50% sannad kasta. Taas bedelkeeda, iibka onlineka ayaa kor u kacay, gaar ahaan Amazon. Sannadka 2020, shirkadda weyn ee internetka ayaa soo warisay in iibiyeyaasha madax-bannaan ee goobtooda ay u rareen $4.8 milyan oo badeecooyin ah Jimcihii Madoow iyo Cyber ​​​​Isniinta - oo kordhay 60% sannadkii hore. Xitaa iyadoo noloshu caadi ku soo noqonayso gudaha United